खाना पकाउन छैन, ग्यास सवारीमा - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / अंक-अर्थ / खाना पकाउन छैन, ग्यास सवारीमा
काठमाडौ, ४ फाल्गुन ।
पर्याप्त आपूर्ति भए पनि बजारमा ग्यास अभावको हटाउन नसकेको सरकारलाई व्यवस्थापिका संसद, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले एउटा कारण देखाइदिएको छ। आइतबारको बैठकमा समितिले यस्तो अभावको एक प्रमुख कारण सवारी साधनमा भइरहेको ग्यासको प्रयोग भनेको छ। खाना पकाउन र सवारी साधनमा प्रयोग गर्न छुट्टाछुट्टै उद्योगको ग्यास प्रयोग गरिन्छ।
खाना पकाउने भन्दा सवारी साधनमा प्रयोग गरिने ग्यासको ढुवानी खर्च बढी हुने गर्छ। खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव देखिँदा पनि ग्यासबाटै चल्ने सवारीमा कुनै समस्या नदेखिनुले अवैध प्रयोग बढेको अनुमान उपसमितिले गरेको हो। जसका कारण खाना पकाउने सिलिन्डर उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। आयल निगमले पनि अभावको एउटा कारण ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई देखाएको छ।
आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले अटो ग्यास उद्योगले पर्याप्त मात्रामा कोटा उठाउन नसकेकाले ट्यापु/माइक्रोमा घरेलु प्रयोजनका लागि उपयोग हुने ग्यास प्रयोग भएको ठहर गरेको हो।
‘ग्यासको सधैं समस्या छ। उपभोक्तालाई सधैं पीडा भएको छ। ४ महिनायता जम्मा ३५/३५ टन मात्रै अटो ग्यास उठेको छ। कम्पनीले सवारी स्ााधनका लागि ग्यास नदिएकाले घरेलु प्रयोजनका लागि चाहिने ग्यास सिलिन्डर ट्याम्पु र माइक्रोमा प्रयोग भएका छन्,’ उपसमितिका सभापति नारायणबहादुर कार्कीले अटो ग्यास उद्योगीसँगको बैठकमा भने, ‘बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारणमध्ये यो एक हो। के भएर ग्यास अभाव भएको छ? अटो ग्यास भनेको कस्तो र के हो? यसको जानकारी चाहन्छौं।’
५४ वटा ग्यास कम्पनीमध्ये २ वटा अटो ग्यास कम्पनी छन्। तिनीहरू भ्याली अटो ग्यास सप्लाई प्रालि र पशुपति अटो ग्यास प्रालि हुन्। यी उद्योगका लागि आयल निगमले १०८/१०८ टन कोटा तोकिएको छ। तर निर्धारण गरेको कोटामध्ये औसत ७० टन आयात गर्दै आएको निगमले जनाएको छ।
यस्तै ४ महिनायाता ग्यास आयातमा आधा कटौती भएको तथ्यांकमा छ। अक्टोभर, नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा ३५ टन मात्रै आयात भएको उल्लेख गरिएको छ।
‘ग्यास आयातमा आधा कटैती हुँदा पनि माइक्रो, ट्याम्पुलाई कहिल्यै अभाव भएको देखिँदैन। यसको मतलव घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास माइक्रो/ट्याम्पुमा खपत भएको छ,’ समिति सचिव सुदर्शन खड्काले भने, ‘यसलाई निगमको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।’ सभासद सुभाव चन्द ठकुरीले आयल निगमले केही प्र्रतिशत सवारी साधनमा प्रयोग भएको बताएकाले उद्योगीले पनि स्विकार्नुपर्ने बताए। ‘अहिले ग्यासको मासिक आयात कोटा बढेर २९ हजार टन पुगेको छ तर पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायम नै छ। निगम स्वयंले केही प्रतिशत घरायसी प्रयोजनको ग्यास सवारी साधनमा प्रयोग भएको दाबी गरेको छ,’ उनले भने, ‘सत्यतालाई व्यवसायीले स्विकार्नुपर्छ।’
सभासदको तर्कलाई बजार अनुगमन गर्न जिम्मा पाएका वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले पनि पुष्टि गर्छ। विभागका अनुसार केही माइक्रो बस र ट्याम्पुले खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘अनुगमनमा केही साना माइक्रो र ट्याम्पुले खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गरेका फेला परेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘घरेलु प्रयोजनका लागि तोकिएको ग्यास सवारी साधनमा राख्नु जोखिम छ।’ खाना पकाउने ग्यास माइक्रोमा प्रयोग गर्दा बढी गन्ध आउने, सिलिन्डर पड्कने खतरा हुन्छ। दुर्घटनाबाट बच्न सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाअनुसार सवारी साधन, भाडासम्बन्धी अनुगमनको संयोजन यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्छ। अनुगमन टोलीमा विभागको प्रतिनिधि मात्रै हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ती अधिकारीले भने, ‘तर सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएको देखिँदैन। अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन।’
अटो उद्योगीहरूका अनुसार मुलुकभरि ग्यासबाट चल्ने सवारी करिब १ हजार २ सय वटा छन्। ती सवारीमा २५ देखि ६० लिटरसम्मको सिलिन्डर हुन्छ। ती सवारीमा दैनिक ४ हजार लिटर -२ दशमलव २३ टन) ग्यास खपत हुन्छ। ग्यासको मूल्य सामान भए पनि आयात गर्दा अटो उद्योगीलाई भाडामा केही महँगो पर्न जान्छ। जसले गर्दा निर्धारित कोटाभन्दा कम आयात भएको उपसमितिको ठहर छ। मासिक ७० टन आइरहेकामा ३५ टन मात्रै आएकामा साना सिलिन्डर केही मात्रामा गाडीमा प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ।
अटो ग्यास उद्योगीहरूले सानो माइक्रोले खाना पकाउने सिलिन्डर गरेको प्रयोग भएको थाहा भए पनि अनुगमन आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नरहेको बताउँछन्।
‘माइक्रोले गर्ने प्रयोग हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गनुपर्छ। यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गनुपर्छ,’ भ्याली अटो ग्यास प्रालिका सुचितराज नर्कनीले भने। उनका अनुसार अटो ग्यास उद्योगीले बरौनी नाकाबाट ग्यास आयात गर्छन। तर केही महिनाअघि मर्मत सम्भारका लागि नाका बन्द रहेको कोटाअनुसार आयात गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ।
बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आयात गर्दा घरायसी र औद्योगिक छुट्टै राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘अटोलाई औद्योगिक भनिए पनि घरायसीको लाइनमा बस्नुपर्छ। घरायसीका लागि धेरै उद्योग छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अटो उद्योगीले धेरै लाइन बस्नुपर्छ। यसले ढुवानीमा समस्या बनाउँछ।’
जाडोमा माग बढ्ने हुँदा त्यही मौका छोपी व्यवसायीले कालाबजारी सुरु गरेपछि बजारमा अभाव देखिएको थियो। अभाव हटाउन निगमले ग्यासको मासिक कोटा बढाएर २९ हजार टन पुयाएको छ। तर पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा पाएका छैनन्।
बजारमा ग्यासको अभाव हुँदा नयाँ सिलिन्डर बेच्ने चलखेलसमेत बढेकाले अभाव नहटेको जानकारहरू बताउँछन्। खाना पकाउने ग्यासको अभाव र सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। ग्यास अभावबारे आइतबार विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले समेत उपसमितिसँग छलफल गरेका थिए।
विद्यार्थीले ग्यासमा दोहोरो सिलिन्डर लागू गरे चलखेल रोकिने सुझाव दिएका थिए। वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो। केही महिनाअघि बरौनी रिफाइनेरी मर्मत सम्भारका लागि बन्द हुँदा त्यस नाकाबाट कम मात्रामा ग्यास भित्रिएको थियो।
त्यसैलाई कारण देखाई बजारमा कालोबजारी गर्ने क्रम बढेको छ। सरकारले अनुगमन गरी कालाबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन।